नेपाली बजारमा सुनको भाउ घट्यो, तोलाको कती ? – ramechhapkhabar.com
नेपाली बजारमा सुनको भाउ घट्यो, तोलाको कती ?
काठमाडौं । मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा ३०० रुपैयाँले गिरावट आएको छ । सोमबार तोलामा ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य मंगलबार घटेर तोलामा ९० हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । यस्तै तेजाबी सुन तोलामा ९० हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
यसैबीच मंगलबार चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । सोमबार तोलामा एक हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य मंगलबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको
काठमाण्डौ – कुखुराको मासुको भाउ बढेको भए पनि किसानलाई भने फाइदा नरहेको कुखुरा उत्पादक किसानहरुले बताएका छन् । नयाँ खालको रानीखेतका कारण ६० प्रतिशतभन्दा धेरै कुखुरा मरेको र दानाको भाउ पनि बढेकाले बजारमा भाउ बढ्दासमेत किसान समस्यामै रहेका नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले जानकारी दिनुभयो । यस्तै अहिले चल्ला ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन भइरहेको छ ।
यसले चल्लाको भाउ आकास्सिएकाले किसान थप मर्कामा परेका व्यवसायीहरुले बताएका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा काठमाण्डौ उपत्यकामा ब्रोइलर कुखुराको तयारी मासुको मूल्य किलोको ४३० रुपैयाँ पुगेको छ । कुखुराको मासुको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च रहेको राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ ।